Adọrọ Mmasị - Njem Ezinụlọ | Ekechukwu, IN | Ebe Nleta Jackson County
ihe na-eme anyi puru iche
Ọdọ Mmiri Brownstown
Àkwà Mmiri Ekpuchiri
Athzọ akụkọ ihe mere eme
Brownstown Speedway mepere 1952 na Highway 250 na Jackson County Fairgrounds, otu maịlị n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Brownstown. A na-agba ọsọ agba ọsọ na Machị ruo Ọktọba na nkeji iri na ụma nke oval track na [...]
Medora kpuchiri Bridge
Medora kpuchie Bridge, nke onye nrụpụta ụlọ JJ Daniels wuru na 1875, bụ àkwà mmiri kachasị ogologo na-ekpuchi ogologo na United States. Dị n'akụkụ Medora na East Fork nke White River kwụsịrị [...]
John Mellencamp gara aga ka a kụrụ nke ọma na Seymour na Jackson County. A mụrụ Mellencamp ebe a na October 7, 1951. Onye lanarịrị oge mbụ nke spina bifida, Mellencamp tolitere na Seymour wee gụchaa [...]
Ekpuchi mkpuchi akwa nke Indiana
Ụlọ ihe nkiri Freeman Army Airfield
Pershing Town Museum
Ọ dị na 4784 West State Road 58 dị na Freetown, ebe a na-edebe ihe ngosi nka bụ nzọ ụkwụ maka oge ndị na-akọ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ndị bi na mpaghara ugbu a. Ihe ochie na ndị agha, foto ụlọ akwụkwọ na [...]
Vallọ ihe nkiri Fort Vallonia
Vallonia na Driftwood Township bara ọgaranya n'akụkọ ihe mere eme ma bụrụ ebe mbụ biri na Jacksongbè Jackson. Vallọ ihe nkiri Fort Vallonia, nke dị na mbara ala nke mgbidi gara aga, nke e wuru na 1810, na-enyere [...]
Ihe ngosi obibi nke Conner
John H. na Thomas Conner Museum of Antique Printing bụ ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ nke oge a na-ebipụta nke 1800, nke dị na mbara ala nke Southern Indiana Center for the Arts. Ndị ọbịa ga-[...]
Countylọ Ọrụ Ihe Mere Eme nke Jackson County
Countylọ Ọrụ Ihe E Mere nke Jackson County mejupụtara ma Historical Society na Genealogical Society. Ihe ngosi ihe mgbe ochie mepere site na 9 ruo 11 nke Tuesday na Tọzdee na site na [...]
Countylọ Ọrụ Nleta Vislọ Ọrụ Jackson County
A na-eme mmemme gara aga na nke ugbu a na County nke County na ihe ngosi mepere na Mee nke 2013 na Jackson County Visitor Center. Ebe nwere obi na akụkọ ihe mere eme nke ya niile, a na-emeso ndị ọbịa ihe na [...]
Regal 8 Thelọ ihe nkiri nkiri
Ihe omuma Downtown Seymour
Meedy W. Shield na nwunye ya Eliza P. Shields debanyere aha obodo Seymour na Eprel 27, 1852. A na-akpọbu obodo ahụ Mules Crossing, mana emesịrị kpọgharịa ya iji sọpụrụ ndị obodo [...]
Akụkọ ihe mere eme Downtown Brownstown - Ewing
Ebe nkiri, Athzọ akụkọ ihe mere eme
Roadgbọ okporo ígwè History
Ebe nkiri, ngosi ihe mgbe ochie
Ilzọ ụgbọ elu n'okpuruala
Osisi Medora Brick
Jackson Live & Omume Center
Jackson Live bu ebe ohuru ohuru nke Seymour. Egosi na Saturday ọ bụla na 7 pm na ọnụ ụzọ na-emeghe na 6: 15 pm Tiketi bụ $ 15 n'ihi na ndị okenye, $ 5 maka afọ 5 site na 12 na ụmụaka 5 na n'okpuru [...]
Shieldstown kpuchie Bridge
Ebe nkiri, Àkwà Mmiri Ekpuchiri
E wuru àkwà mmiri kpuchie Shieldstown na 1876 ma kpọọ ya aha maka igwe nri ezinụlọ nwere n'ime obodo Shield dị nso. Ọ na -efu $ 13,600 ma bụrụ ọmụmaatụ nke mmalite narị afọ nke 19 osisi [...]
Skyline Drive bụ akụkụ nke Jackson-Washington State Forest. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị elu na Jackson County. Enwere ọtụtụ ebe ị na-ekiri site na ebe dị elu yana ebe a na-atụgharị. [...]
E guzobere Muscatatuck National Wildlife Refuge na 1966 dị ka ebe mgbaba iji nye ebe izu ike na nri maka mmiri mmiri n'oge njem ha kwa afọ. Ebe mgbaba ahụ dị na acres 7,724. Na [...]
Mpaghara Ogige ntụrụndụ nke Oghere
Mpaghara Ntụrụndụ Starve-Hollow gụnyere ihe dịka 280 acres na-enye ụfọdụ n'ime ogige kachasị mma na ndịda Indiana. Edere ya na 18,000-acre Jackson-Washington State Forest ọ [...]
Oke ohia nke Washington-Washington State
Oke ohia Jackson-Washington State gbara ihe ruru acres 18,000 na ógbè Jackson na Washington dị na etiti ndịda Indiana. Isi ohia na mpaghara ulo oru di na ndida 2.5 nke ndida-anyanwu nke [...]
Pinnacle Peak bụ ihe dị n’okporo ụzọ dị na Jackson-Washington State Forest na-enye echiche dị ịtụnanya.
Ihe ngosi Egwu
Ụjọ Egwu - Indiana's Scariest Haunted House bụ ihe na -adọrọ mmasị dịka ọ nweghị ọzọ. N'ịbụ nke a na -eme na ngwụsị izu n'oge mgbụsị akwụkwọ, ebe a na -enye mkpali kachasị mma nke oge. Chọpụta ihe niile [...]
Racin 'Mason Pizza & Fun Mpaghara
Racin 'Mason Pizza Fun Mpaghara bụ ebe zuru oke iji were ụmụaka maka ntụrụndụ. Gaa Karts, ụgbọ ala bọmbụ, obere golf na-acha akwụkwọ ndụ, egwuregwu arcade, ụlọ bouncy, nri na ihe ọchị niile ị nwere ike [...]